တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ပြည်ထောင်စု တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားနှငျ့ ပွညျထောငျစု – Federal Journal
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများနှင့် ပြည်ထောင်စု တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားနှငျ့ ပွညျထောငျစု
တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များသည် ဗမာများနှင့် ထာဝရပေါင်းရန်မဟုတ်ဘဲ ယာယီပူးပေါင်းရန်သာ ချုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာါန်းခွင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်သည် မခွဲထွက်မီ၊ လွတ်လပ်ရေး မယူမီ ယာယီကျင့်သုံးရမည့် မူသာလျှင်ဖြစ်ကြောင်းကို စာချုပ်အားဖြင့် ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသည်ကို အားလုံးသိရှိရန်လိုပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေ စာအုပ် စာမျက်နှာ (၂၇၈)တွင် ရေးသားဖော်ပြထားသော ပင်လုံစာချုပ်သည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီမှ ဝန်ကြီးအချို့နှင့် စော်ဘွားအားလုံးအပြင် ရှမ်းပြည်၊ ကချင် တောင်တန်းဒေသနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြသော ပင်လုံတွင် ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေး၌ ကြားဖြတ် မြန်မာအစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင် နှင့် ချင်းတို့သည် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအဖွဲ့ဝင်တို့က ယုံကြည်ကြသည့်အတိုင်း တညီတညွှတ်တည်း အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူညီကြသည်။
(၁) တောင်တန်းသားများကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန် တောင်ပေါ်သားများ ညီညွှတ်ရေးဦးစီးအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ်များက ထောက်ခံသည့် ကိုယ်စားလှယ်တဦးကို ဘုရင်ခံက ရွေးချယ်၍ ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အတိုင်ပင်ခံ တဦးအဖြစ်ခန့်အပ်ရမည်။
(၂) ထိုအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဌါနလက်ကိုင်မရှိ ဝန်ကြီးအဖြစ်လည်း ခန့်အပ်ရမည်။ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဌါနနည်းတူ တောင်တန်းဒေသရေးရာဌါနကိုလည်း ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌါန်း၍ အမှုဆောင်ကောင်စီ အောက်၌ထားရှိရမည်။ ထိုတောင်တန်းဒေသရေးရာဌါနကိုလည်း ဥပဒေဖြင့် ပြဋ္ဌါန်း၍ အမှုဆောင်ကောင်စီအောက်၌ထားရှိရမည်။ ထိုတောင်တန်းဒေသဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီးအား အလားတူနည်းအတိုင်း အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာများကို အပ်နှင်းရမည်။
(၃) ထိုအတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီးအား ကူညီရန်အတွက် ယင်းနှင့်လူမျိုးတူမဟုတ်သည့် အခြားတောင်တန်းသားများအား ကိုယ်စားပြုသော တွဲဘက်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦး ရှိရမည်။ ထိုအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည် မထမဦးစွာ မိမိတို့၏ ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရေးရာများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရမည်။ အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီးမှာမူ ကျန်ရှိသည့်အခြားသော တောင်တန်းရေးရာဒေသများကို စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရမည်။ ယင်းပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦးတို့သည် အခြေခံဥပဒေကပြဋ္ဌါန်းသည့်အတိုင်း စုပေါင်းတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ရမည်။
(၄) အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီးသည် အမှုဆောင်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့် ကောင်စီတွင် တောင်တန်းဒေသများ၏ တဦးတည်းသော ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သော်လည်း တောင်တန်းဒေသကိစ္စများကို ဆွေးနွေးသောအခါ တွဲဖက် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးသည် ကောင်စီအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
(၅) အထက်ပါသဘောတူညီချက်အရ ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီကို တိုးချဲ့မည်ဖြစ်သော်လည်း တောင်တန်းဒေသများ၏ နယ်တွင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွင် ယခုလက်ရှိ ခံစားလျှက်ရှိသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး ဆုံးပါးရန် မည်သည့်ဒေသတွင်မဆို လုံးဝပြုလုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်။ တောင်တန်းဒေသများအတွက် နယ်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိကြောင်းမူအားဖြင့် လက်ခံသည်။
(၆) မြန်မာပြည်ထောင်စုအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်အတွက် နယ်ခြားသတ်မှတ်ရေးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တည်ထောင်ရေးကို တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြဆုံးဖြတ်စေရမည် ဖြစ်သော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော ပြည်နယ်မှာ လိုအပ်သည်ဟုသဘောတူ လက်ခံကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ကို ပထမဆင့်အဖြစ် အကောင်အထည်ဖော်သည့် အနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အက်ဥပဒေအရ အပိုင်း ၂ ခြွင်းချန် ဒေသများကို အုပ်ချုပ်သည့် နည်းတူ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်မော်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသများ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍လည်း တောင်တန်းဒေသ အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီးနှင့် တွဲဘက်အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီးတို့ကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်။
(၇) တောင်တန်းဒေသရှိ ပြည်သူတို့သည် ဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်များတွင် အခြေခံအခွင့်အရေးနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိခံစားစေရမည်။
(၈) ဤစာချုပ်ပါ အစီအစဉ်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ယခုကျင့်သုံးခွင့်ပြုထားသော ဘဏ္ဍာရေး ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့်ကို မည်သို့မှ ထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရ။
(၉) ဤစာချုပ်ပါ အစီအစဉ်များသည် မြန်မာပြည်၏ အခွန်ဘဏ္ဍာထဲမှ ကချင်တောင်တန်းဒေသနှင့် ချင်းတောင်တန်းဒေသတို့က ရပိုင်ခွင့်ရှိသော ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီအား မည်သို့မျှထိခိုင်ခြင်းမရှိစေရ။ ထို့ပြင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည်တို့၏ ဘဏ္ဍာရေး စီစဉ်ဆက်သွယ်မှုများကဲ့သို့ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ အမှုဆောင်ကောင်စီသည် တောင်တန်းဒေသအတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီး တွဲဘက်အတိုင်ပင်ခံများနှင့် အတူစူးစမ်းလေ့လာမည်။
ပင်လံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသော ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများမှာ –
(၁) ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း – မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်
(၂) စပ်ခွန်ပန်းစိန် – တောင်ပိုင်းစော်ဘွား
(၃) စပ်ရွှေသိုက် – ညောင်ရွှေစော်ဘွား
(၄) စပ်တုံဖ – မြောက်ပိုင်းသန္နီစော်ဘွား
(၅) စပ်နွံ – လဲချားစော်ဘွား
(၆) စပ်စံထွန်း – မိုင်းပွန်စော်ဘွား
(၇) စပ်ထွန်းအေး – သာမိုင်းခမ်းစော်ဘွား
(၈) ဦးဖြူ – သထုံစော်ဘွား ကိုယ်စားလှယ်
(၉) ဦးခွန်ဖုန်း – ဘူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၀) ဦးတင်အေး – လူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၁) ဦးကြာပု – လူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၂) စင်ယိပ်ဖ – ဘူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၃) ဥိးထွန်းမြင့် – လူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၄) ဦးခွန်စော – လူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၅) ဦးခွန်ထီး – လူထုကိုယ်စားလှယ်
(၁၆) ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင် – ကချင်ကိုယ်စားလှယ် (မြစ်ကြီးနား)
(၁၇) ဒူဝါဇော်ရစ် – ကချင်ကိုယ်စားလှယ် (မြစ်ကြီးနား)
(၁၈) ဦးဒိန်ရတန် – ကချင်ကိုယ်စားလှယ် (မြစ်ကြီးနား)
(၁၉) ဒူဝါဇော်လွန် – ကချင်ကိုယ်စားလှယ် (ဗန်မော်)
(၂၀) ဦးလဘန်ဂရောင် – ကချင်ကိုယ်စားလှယ် (ဗန်မော်)
(၂၁) ဦးလွှာမှုန်း – ချင်းကိုယ်စားလှယ် (ဖလမ်း)
(၂၂) ဦးထောင်ဇာခုပ် – ချင်းကိုယ်စားလှယ် (တီးတိန်)
(၂၃) ဦးကီယိုမန်း – ချင်းကိုယ်စားလှယ် (ဟားခါး)
ပင်လုံစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်က အဘယ်နည်း ?
ပင်လုံစာချုပ်၏ ရည်ရွယ်ချက်သည် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း တို့သည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် ဆက်လက်နေသည်ထက် မြန်မာကြားဖြတ်အစိုးရနှင့် ချက်ချင်းပူးပေါင်းလိုက်ခြင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်ရေးကို ပိုမိုလျှင်မြန်စွာရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုကြောင်းကို နိဒါန်းတွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့သည် ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရယူရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည့်အတွက် ထာဝရ ပူးပေါင်းရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မဟုတ်ဘဲ ယာယီပူးပေါင်းရန် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပင်လုံစာချုပ်ကို လေ့လာသုံးသပ်ရပါက ထာဝရပေါင်းရန် လက်မှတ်ရေးထိုးကြခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပြည်ောထင်စုမှ လွတ်လပ်ရေးရယူပြီးအချိန်မရွေး ခွဲထွက်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယာယီပူးပေါင်းကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း နိဒါန်းတွင် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသဖြင့် ပြည်ထောင်စုသည် ထာဝရ ပြည်ထောင်စု မဟုတ် လွတ်လပ်ရေးမယူမီ မခွဲထွက်မီ ယာယီပူးပေါင်းသော ယာယီပြည်ထောင်စုသာ ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။
ပင်လုံစာချုပ် အချက်(၅)တွင် ဖော်ပြသော နယ်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိကြောင်း မူအားဖြင့် လက်ခံသည်ဟု လက်မှတ်ရေးထိုးသည်မှာ ပြည်ထောင်စုမှ လွတ်လပ်ရေးယူပြီး မခွဲထွက်မီ ယာယီ ပူးပေါင်းရေးကာလတွင် ကျင့်သုံးရမည့် ပူးပေါင်းရေးမူဝါဒသာ ဖြစ်ပါသည်။ အချက်(၇)လဲဘဲ ယာယီပူးပေါင်းရေးကာလတွင်း ကျင့်သုံးရမည့် အချက်အလက်ဖြစ်သည်မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ အရေးနှင့် ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေစာအုပ် စာမျက်နှာ ၂၉၁-၂၀၂ တို့ ကြည့်ပါက –
(က) မည်သူမဆို တန်းတူအခွင့်အရေးရှိရမည်။
(ခ) တောင်တန်းဒေသ ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးတွင် မိမိတို့၏ ပြည်နယ်တွင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌါန်းခွင့် အပြည့်အဝရှိရမည်။
(ဂ) လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်တွင် မြန်မာပြည်မမှ ခွဲထွက်နိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်(၃) တောင်တန်းဒေသပြည်နယ်များအား ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ သံတမန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ခန့်ထားခြင်း မပြုရန် ဟူသော အချက်ကို အနာဂတ်တွင်ရေးဆွဲမည့် မြန်မာနိုင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရမည်ဟု ဆုံးဖြတ်သည်။
(၄) ကာကွယ်ရေးအစိရှိသော တနိုင်ငံလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကိစ္စများတွင် တောင်တန်းဒေသကိုယ်စားလှယ်အများစု သဘောတူညီမှုမရှိဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်မချရ။
(၅) တောင်တန်းဒေသပြည်နယ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ အကျိုးသက်ရောက် မည့်ပြောင်းလဲချက်၊ ပြင်ဆင်ချက်၊ မွမ်းမံချက်များကို တောင်တန်းဒေသပြည်နယ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဆန္ဒမဲစုပုံ ၂ ပုံ မရလျှင် မပြုလုပ်ရဟူသော အချက်ကို ပြည်ထောာင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခြေခံဥပဒေတွင် ထည့်သွင်းရမည်။
(၇) ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်မဲ စုစုပေါင်း ဗမာဝန်ကြီးအရေအတွက်သည် တောင်တန်းဒေသ ပြည်နယ်များ၏ စုစုပေါင်းဝန်ကြီးအရေအတွက်ထက်မများစေရ။ အချက်(၁)နှင့် (၆)ကိုတော့ မရေးတော့မရေးတော့ပါ။
အချက်(၇)ချက်အနက် အချက်အမှတ် ၁ နှင့် ၂ မှာ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေး ဦးစီးအဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်၍ အချက်အမှတ် ၃ မှ ၆ အထိမှာ မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။
ပထမဆုံးသော ချင်းရေးရာဝန်ကြီး ဝမ်းသူမောင်၏ ချင်းအမျိုးသားနေ့ မိန့်ခွန်း
ပထမဆုံးသော ချင်းရေးရာဝန်ကြိး ဦးဝမ်သူမောင်ကလည်း မင်းတပ်မြို့၌ ကျင်းပသော ပထမအကြိမ် ချင်းအမျိုးသားနေ့၌ မိန့်ခွင့်ပြောကြာရာတွင် အချက်(၃)ချက်ထဲမှ အချက်(၁)တွင် အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြား သွားပါသည်။
(၁) ဗမာများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ရမ်းနှင့်ကချင်၊ ချင်းတို့၏ လွတ်လပ်ရေးသည် ပိုမိုလျှင်မြန် စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း စသည်ဖြင့် ဟောပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းတို့သည် ဗမာများနှင့် ထာဝရ ပူးပေါင်းရန်မဟုတ်ဘဲ ခွဲထွက်ချိန်တန်သည့်အချိန် ဗမာများမှ ခွဲထွက်ပြီး လွတ်လပ်ရေး ရယူရန်ဖြစ်ကြောင်းကို ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါသည်။ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများသည် အင်္ဂလိပ်လက်အောက်တွင် တခါ ဗမာလက်အောက်တွင် တခါ တခြားလူမျိုးများလက်အောက်၌ ကျွန်ဘဝအဖြစ် ၂ ခါ ကျရောက်နေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ပင်လုံစာချုပ်ကို သစ္စာဖောက်၍ အားလုံးဖျက်ဆီးပြီး ကိုယ်ပိုင် ပြဋ္ဌါန်းခွင့်မပေးဘဲ ဗများက သူတို့ကြိုက်သလို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲ အုပ်ချုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။
တိုငျးရငျးသားပွညျနယျမြားသညျ ဗမာမြားနှငျ့ ထာဝရပေါငျးရနျမဟုတျဘဲ ယာယီပူးပေါငျးရနျသာ ခြုပျဆိုခွငျးဖွဈကွောငျးနှငျ့ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌာါနျးခှငျ့ ဖကျဒရယျပွညျထောငျစု စနဈသညျ မခှဲထှကျမီ၊ လှတျလပျရေး မယူမီ ယာယီကငျြ့သုံးရမညျ့ မူသာလြှငျဖွဈကွောငျးကို စာခြုပျအားဖွငျ့ ပျေါလှငျထငျရှားနသေညျကို အားလုံးသိရှိရနျလိုပါသညျ။ တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြားအရေးနှငျ့ ၁၉၄၇ အခွခေံဥပဒေ စာအုပျ စာမကျြနှာ (၂၇၈)တှငျ ရေးသားဖျောပွထားသော ပငျလုံစာခြုပျသညျ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါသညျ။
မွနျမာပွညျဘုရငျခံ၏ အမှုဆောငျကောငျစီမှ ဝနျကွီးအခြို့နှငျ့ စျောဘှားအားလုံးအပွငျ ရှမျးပွညျ၊ ကခငျြ တောငျတနျးဒသေနှငျ့ ခငျြးတောငျတနျးဒသေမြားမှ ကိုယျစားလှယျမြား တကျရောကျကွသော ပငျလုံတှငျ ကငျြးပသညျ့ အစညျးအဝေး၌ ကွားဖွတျ မွနျမာအစိုးရနှငျ့ ခကျြခငျြးပူးပေါငျးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ ရှမျး၊ ကခငျြ နှငျ့ ခငျြးတို့သညျ လှတျလပျရေးကို ပိုမိုလငျြမွနျစှာ ရရှိလိမျ့မညျဟု အစညျးအဝေးတကျရောကျသူအဖှဲ့ဝငျတို့က ယုံကွညျကွသညျ့အတိုငျး တညီတညှတျတညျး အောကျပါအတိုငျး သဘောတူညီကွသညျ။
(၁) တောငျတနျးသားမြားကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ ဆောငျရှကျရနျ တောငျပျေါသားမြား ညီညှတျရေးဦးစီးအဖှဲ့မှ ကိုယျစားလှယျမြားက ထောကျခံသညျ့ ကိုယျစားလှယျတဦးကို ဘုရငျခံက ရှေးခယျြ၍ ဘုရငျခံ၏ အမှုဆောငျကောငျစီတှငျ အတိုငျပငျခံ တဦးအဖွဈခနျ့အပျရမညျ။
(၂) ထိုအတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျကို ဌါနလကျကိုငျမရှိ ဝနျကွီးအဖွဈလညျး ခနျ့အပျရမညျ။ ကာကှယျရေးနှငျ့ နိုငျငံခွားရေးဌါနနညျးတူ တောငျတနျးဒသေရေးရာဌါနကိုလညျး ဥပဒဖွေငျ့ ပွဋ်ဌါနျး၍ အမှုဆောငျကောငျစီ အောကျ၌ထားရှိရမညျ။ ထိုတောငျတနျးဒသေရေးရာဌါနကိုလညျး ဥပဒဖွေငျ့ ပွဋ်ဌါနျး၍ အမှုဆောငျကောငျစီအောကျ၌ထားရှိရမညျ။ ထိုတောငျတနျးဒသေဆိုငျရာ အတိုငျပငျခံ ဝနျကွီးအား အလားတူနညျးအတိုငျး အုပျခြုပျခှငျ့အာဏာမြားကို အပျနှငျးရမညျ။
(၃) ထိုအတိုငျပငျခံ ဝနျကွီးအား ကူညီရနျအတှကျ ယငျးနှငျ့လူမြိုးတူမဟုတျသညျ့ အခွားတောငျတနျးသားမြားအား ကိုယျစားပွုသော တှဲဘကျအတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျနှဈဦး ရှိရမညျ။ ထိုအတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျနှဈဦးသညျ မထမဦးစှာ မိမိတို့၏ ဆိုငျရာနယျပယျရေးရာမြားကို စီမံခနျ့ခှဲဆောငျရှကျရမညျ။ အတိုငျပငျခံ ဝနျကွီးမှာမူ ကနျြရှိသညျ့အခွားသော တောငျတနျးရေးရာဒသေမြားကို စီမံခနျ့ခှဲဆောငျရှကျရမညျ။ ယငျးပုဂ်ဂိုလျ သုံးဦးတို့သညျ အခွခေံဥပဒကေပွဋ်ဌါနျးသညျ့အတိုငျး စုပေါငျးတာဝနျယူလုပျကိုငျရမညျ။
(၄) အတိုငျပငျခံဝနျကွီးသညျ အမှုဆောငျကောငျစီအဖှဲ့ဝငျအနဖွေငျ့ ကောငျစီတှငျ တောငျတနျးဒသေမြား၏ တဦးတညျးသော ကိုယျစားလှယျဖွဈသျောလညျး တောငျတနျးဒသေကိစ်စမြားကို ဆှေးနှေးသောအခါ တှဲဖကျ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျနှဈဦးသညျ ကောငျစီအစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျနိုငျခှငျ့ရှိရမညျ။
(၅) အထကျပါသဘောတူညီခကျြအရ ဘုရငျခံ၏ အမှုဆောငျကောငျစီကို တိုးခြဲ့မညျဖွဈသျောလညျး တောငျတနျးဒသေမြား၏ နယျတှငျးအုပျခြုပျရေးတှငျ ယခုလကျရှိ ခံစားလြှကျရှိသော ကိုယျပိုငျအုပျခြုပျရေး ဆုံးပါးရနျ မညျသညျ့ဒသေတှငျမဆို လုံးဝပွုလုပျလိမျ့မညျ မဟုတျ။ တောငျတနျးဒသေမြားအတှကျ နယျတှငျး အုပျခြုပျရေးတှငျ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌါနျးခှငျ့ အပွညျ့အဝရှိကွောငျးမူအားဖွငျ့ လကျခံသညျ။
(၆) မွနျမာပွညျထောငျစုအတှငျး ကခငျြပွညျနယျအတှကျ နယျခွားသတျမှတျရေးနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျတညျထောငျရေးကို တိုငျးပွုပွညျပွု လှတျတျောသို့ တငျပွဆုံးဖွတျစရေမညျ ဖွဈသျောလညျး ထိုကဲ့သို့သော ပွညျနယျမှာ လိုအပျသညျဟုသဘောတူ လကျခံကွသညျ။ ဤရညျရှယျခကျြကို ပထမဆငျ့အဖွဈ အကောငျအထညျဖျောသညျ့ အနဖွေငျ့ ၁၉၃၅ ခုနှဈ၊ မွနျမာနိုငျငံအစိုးရ အကျဥပဒအေရ အပိုငျး ၂ ခွှငျးခနျြ ဒသေမြားကို အုပျခြုပျသညျ့ နညျးတူ မွဈကွီးနားနှငျ့ ဗနျမျောခရိုငျအတှငျးရှိ ဒသေမြား အုပျခြုပျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍လညျး တောငျတနျးဒသေ အတိုငျပငျခံဝနျကွီးနှငျ့ တှဲဘကျအတိုငျပငျခံဝနျကွီးတို့ကို တိုငျပငျဆှေးနှေးရမညျ။
(၇) တောငျတနျးဒသေရှိ ပွညျသူတို့သညျ ဒီမိုကရစေီတိုငျးပွညျမြားတှငျ အခွခေံအခှငျ့အရေးနှငျ့ ရပိုငျခှငျ့မြားကို ရရှိခံစားစရေမညျ။
(၈) ဤစာခြုပျပါ အစီအစဉျမြားသညျ ရှမျးပွညျနယျတှငျ ယခုကငျြ့သုံးခှငျ့ပွုထားသော ဘဏ်ဍာရေး ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌါနျးခှငျ့ကို မညျသို့မှ ထိခိုကျခွငျးမရှိစရေ။
(၉) ဤစာခြုပျပါ အစီအစဉျမြားသညျ မွနျမာပွညျ၏ အခှနျဘဏ်ဍာထဲမှ ကခငျြတောငျတနျးဒသေနှငျ့ ခငျြးတောငျတနျးဒသေတို့က ရပိုငျခှငျ့ရှိသော ဘဏ်ဍာရေးအကူအညီအား မညျသို့မြှထိခိုငျခွငျးမရှိစရေ။ ထို့ပွငျ ရှမျးပွညျနယျနှငျ့ မွနျမာပွညျတို့၏ ဘဏ်ဍာရေး စီစဉျဆကျသှယျမှုမြားကဲ့သို့ လကျတှကေ့ငျြ့သုံးနိုငျခွငျး ရှိ မရှိ အမှုဆောငျကောငျစီသညျ တောငျတနျးဒသေအတိုငျပငျခံ ဝနျကွီး တှဲဘကျအတိုငျပငျခံမြားနှငျ့ အတူစူးစမျးလလေ့ာမညျ။
ပငျလံစာခြုပျကို လကျမှတျရေးထိုးကွသော ကိုယျစားလှယျတျောကွီးမြားမှာ –
(၁) ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး – မွနျမာအစိုးရ ကိုယျစားလှယျ
(၂) စပျခှနျပနျးစိနျ – တောငျပိုငျးစျောဘှား
(၃) စပျရှသေိုကျ – ညောငျရှစေျောဘှား
(၄) စပျတုံဖ – မွောကျပိုငျးသန်နီစျောဘှား
(၅) စပျနှံ – လဲခြားစျောဘှား
(၆) စပျစံထှနျး – မိုငျးပှနျစျောဘှား
(၇) စပျထှနျးအေး – သာမိုငျးခမျးစျောဘှား
(၈) ဦးဖွူ – သထုံစျောဘှား ကိုယျစားလှယျ
(၉) ဦးခှနျဖုနျး – ဘူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၀) ဦးတငျအေး – လူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၁) ဦးကွာပု – လူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၂) စငျယိပျဖ – ဘူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၃) ဥိးထှနျးမွငျ့ – လူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၄) ဦးခှနျစော – လူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၅) ဦးခှနျထီး – လူထုကိုယျစားလှယျ
(၁၆) ဆမားဒူဝါဆငျဝါးနောငျ – ကခငျြကိုယျစားလှယျ (မွဈကွီးနား)
(၁၇) ဒူဝါဇျောရဈ – ကခငျြကိုယျစားလှယျ (မွဈကွီးနား)
(၁၈) ဦးဒိနျရတနျ – ကခငျြကိုယျစားလှယျ (မွဈကွီးနား)
(၁၉) ဒူဝါဇျောလှနျ – ကခငျြကိုယျစားလှယျ (ဗနျမျော)
(၂၀) ဦးလဘနျဂရောငျ – ကခငျြကိုယျစားလှယျ (ဗနျမျော)
(၂၁) ဦးလှာမှုနျး – ခငျြးကိုယျစားလှယျ (ဖလမျး)
(၂၂) ဦးထောငျဇာခုပျ – ခငျြးကိုယျစားလှယျ (တီးတိနျ)
(၂၃) ဦးကီယိုမနျး – ခငျြးကိုယျစားလှယျ (ဟားခါး)
ပငျလုံစာခြုပျ၏ ရညျရှယျခကျြက အဘယျနညျး ?
ပငျလုံစာခြုပျ၏ ရညျရှယျခကျြသညျ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ခငျြး တို့သညျ အင်ျဂလိပျလကျအောကျတှငျ ဆကျလကျနသေညျထကျ မွနျမာကွားဖွတျအစိုးရနှငျ့ ခကျြခငျြးပူးပေါငျးလိုကျခွငျးအားဖွငျ့ လှတျလပျရေးကို ပိုမိုလြှငျမွနျစှာရရှိရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ပငျလုံစာခြုပျကို ခြုပျဆိုကွောငျးကို နိဒါနျးတှငျ အတိအလငျးဖျောပွထားသညျကို တှရှေိ့ရပါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ရှမျး၊ ကခငျြ၊ ခငျြးတို့သညျ ပွညျထောငျစုမှ ခှဲထှကျပွီး လှတျလပျရေးရယူရနျ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးနှငျ့ နှဈဦးနှဈဘကျ သဘောတူလကျမှတျရေးထိုးကွသညျ့အတှကျ ထာဝရ ပူးပေါငျးရနျ လကျမှတျရေးထိုးခွငျး မဟုတျဘဲ ယာယီပူးပေါငျးရနျ လကျမှတျရေးထိုးခွငျးသာဖွဈကွောငျး ပျေါလှငျထငျရှားနပေါသညျ။
ထို့ကွောငျ့ ပငျလုံစာခြုပျကို လလေ့ာသုံးသပျရပါက ထာဝရပေါငျးရနျ လကျမှတျရေးထိုးကွခွငျးမဟုတျဘဲ ပွညျောထငျစုမှ လှတျလပျရေးရယူပွီးအခြိနျမရှေး ခှဲထှကျရနျ ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ယာယီပူးပေါငျးကွခွငျးဖွဈကွောငျး နိဒါနျးတှငျ အတိအလငျး ဖျောပွထားသဖွငျ့ ပွညျထောငျစုသညျ ထာဝရ ပွညျထောငျစု မဟုတျ လှတျလပျရေးမယူမီ မခှဲထှကျမီ ယာယီပူးပေါငျးသော ယာယီပွညျထောငျစုသာ ဖွဈကွောငျးတှရှေိ့ရပါသညျ။
ပငျလုံစာခြုပျ အခကျြ(၅)တှငျ ဖျောပွသော နယျတှငျး အုပျခြုပျရေးတှငျ ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌါနျးခှငျ့ အပွညျ့အဝရှိကွောငျး မူအားဖွငျ့ လကျခံသညျဟု လကျမှတျရေးထိုးသညျမှာ ပွညျထောငျစုမှ လှတျလပျရေးယူပွီး မခှဲထှကျမီ ယာယီ ပူးပေါငျးရေးကာလတှငျ ကငျြ့သုံးရမညျ့ ပူးပေါငျးရေးမူဝါဒသာ ဖွဈပါသညျ။ အခကျြ(၇)လဲဘဲ ယာယီပူးပေါငျးရေးကာလတှငျး ကငျြ့သုံးရမညျ့ အခကျြအလကျဖွဈသညျမှာ ပျေါလှငျထငျရှားနပေါသညျ။
တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား အရေးနှငျ့ ၁၉၄၇ အခွခေံဥပဒစောအုပျ စာမကျြနှာ ၂၉၁-၂၀၂ တို့ ကွညျ့ပါက –
(က) မညျသူမဆို တနျးတူအခှငျ့အရေးရှိရမညျ။
(ခ) တောငျတနျးဒသေ ကိုယျစားလှယျအားလုံးတှငျ မိမိတို့၏ ပွညျနယျတှငျး ကိုယျပိုငျပွဋ်ဌါနျးခှငျ့ အပွညျ့အဝရှိရမညျ။
(ဂ) လှတျလပျရေးရရှိပွီးနောကျတှငျ မွနျမာပွညျမမှ ခှဲထှကျနိုငျခှငျ့ရှိရမညျ။
ဆုံးဖွတျခကျြ(၃) တောငျတနျးဒသေပွညျနယျမြားအား ကွိုတငျအသိမပေးဘဲ သံတမနျဆကျသှယျခွငျးနှငျ့ ခနျ့ထားခွငျး မပွုရနျ ဟူသော အခကျြကို အနာဂတျတှငျရေးဆှဲမညျ့ မွနျမာနိုငျဖှဲ့စညျးအုပျခြုပျပုံ အခွခေံဥပဒတှေငျ ထညျ့သှငျးရမညျဟု ဆုံးဖွတျသညျ။
(၄) ကာကှယျရေးအစိရှိသော တနိုငျငံလုံးနှငျ့ သကျဆိုငျသညျ့ အရေးကိစ်စမြားတှငျ တောငျတနျးဒသေကိုယျစားလှယျအမြားစု သဘောတူညီမှုမရှိဘဲ ဆုံးဖွတျခကျြမခရြ။
(၅) တောငျတနျးဒသေပွညျနယျမြားနှငျ့ တိုကျရိုကျဖွဈစေ သှယျဝိုကျ၍ဖွဈစေ အကြိုးသကျရောကျ မညျ့ပွောငျးလဲခကျြ၊ ပွငျဆငျခကျြ၊ မှမျးမံခကျြမြားကို တောငျတနျးဒသေပွညျနယျကိုယျစားလှယျမြား၏ ဆန်ဒမဲစုပုံ ၂ ပုံ မရလြှငျ မပွုလုပျရဟူသော အခကျြကို ပွညျထောာငျစု မွနျမာနိုငျငံ၏ အခွခေံဥပဒတှေငျ ထညျ့သှငျးရမညျ။
(၇) ပွညျထောငျစုအဖှဲ့တှငျ ပါဝငျမဲ စုစုပေါငျး ဗမာဝနျကွီးအရအေတှကျသညျ တောငျတနျးဒသေ ပွညျနယျမြား၏ စုစုပေါငျးဝနျကွီးအရအေတှကျထကျမမြားစရေ။ အခကျြ(၁)နှငျ့ (၆)ကိုတော့ မရေးတော့မရေးတော့ပါ။
အခကျြ(၇)ခကျြအနကျ အခကျြအမှတျ ၁ နှငျ့ ၂ မှာ မတျလ ၂၃ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပသော တောငျတနျးသားမြား စညျးလုံးညီညှတျရေး ဦးစီးအဖှဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြမြားဖွဈ၍ အခကျြအမှတျ ၃ မှ ၆ အထိမှာ မတျလ ၂၇ ရကျနတှေ့ငျ ကငျြးပသော အစညျးအဝေး ဆုံးဖွတျခကျြမြားဖွဈကွသညျ။
ပထမဆုံးသော ခငျြးရေးရာဝနျကွီး ဝမျးသူမောငျ၏ ခငျြးအမြိုးသားနေ့ မိနျ့ခှနျး
ပထမဆုံးသော ခငျြးရေးရာဝနျကွိး ဦးဝမျသူမောငျကလညျး မငျးတပျမွို့၌ ကငျြးပသော ပထမအကွိမျ ခငျြးအမြိုးသားနေ့၌ မိနျ့ခှငျ့ပွောကွာရာတှငျ အခကျြ(၃)ခကျြထဲမှ အခကျြ(၁)တှငျ အောကျပါအတိုငျး ပွောကွား သှားပါသညျ။
(၁) ဗမာမြားနှငျ့ပူးပေါငျးဆောငျရှကျခွငျးအားဖွငျ့ ရမျးနှငျ့ကခငျြ၊ ခငျြးတို့၏ လှတျလပျရေးသညျ ပိုမိုလြှငျမွနျ စှာ ရရှိလိမျ့မညျဟု ယုံကွညျကွောငျး စသညျဖွငျ့ ဟောပွောပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ရှမျး၊ ကခငျြနှငျ့ ခငျြးတို့သညျ ဗမာမြားနှငျ့ ထာဝရ ပူးပေါငျးရနျမဟုတျဘဲ ခှဲထှကျခြိနျတနျသညျ့အခြိနျ ဗမာမြားမှ ခှဲထှကျပွီး လှတျလပျရေး ရယူရနျဖွဈကွောငျးကို ပျေါလှငျထငျရှားနပေါသညျ။ တိုငျးရငျးသား လူမြိုးမြားသညျ အင်ျဂလိပျလကျအောကျတှငျ တခါ ဗမာလကျအောကျတှငျ တခါ တခွားလူမြိုးမြားလကျအောကျ၌ ကြှနျဘဝအဖွဈ ၂ ခါ ကရြောကျနပေါသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော ပငျလုံစာခြုပျကို သစ်စာဖောကျ၍ အားလုံးဖကျြဆီးပွီး ကိုယျပိုငျ ပွဋ်ဌါနျးခှငျ့မပေးဘဲ ဗမြားက သူတို့ကွိုကျသလို ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံဥပဒရေေးဆှဲ အုပျခြုပျနသေောကွောငျ့ ဖွဈပါ သညျ။